နှလုံးသားရပ်ဝန်းမှ အသံများ...။: June 2009
ဒီတစ်ခါတော့ လတ်တလော ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ ကမ္ဘာ့ အိုင်တီ သတင်းများကို တင်ပြချင်ပါတယ်။
Apple က အရာရှိကြီး Steve Jobs တစ်ယောက် အသည်းအစားထိုး ကုသမှုနဲ့ ဆေးခွင့် ၆လ နားရာကနေ ဒီတနင်္လာနေ့က စပြီး လုပ်ငန်းခွင်ကို ပြန်လည် ၀င်ရောက်လာပါပြီ။ စတိ တစ်ယောက် ဖျားနာနေတုန်းက အကြောင်းရင်း အမှန်ကို ရှယ်ယာဝင်များထံ တရားဝင်အကြောင်း ပြန်ကြားမှုတွေ မလုပ်ခဲ့လို့ Apple ကို အပြစ်တင်နေကြပါတယ်။ စတိရဲ့ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ကုသချက်တွေကို ဖုံးကွယ်ပေးခဲ့တဲ့ ဆေးရုံကိုလဲ မီဒီယာက အပြစ်ဖို့ကြပါတယ်။
ဒုတိယမျိုးဆက် iPhone မှာ အရင်တုန်းက ဓါတ်ပုံ၊ ဗွီဒီယိုများ ပေးပို့နိုင်တဲ့ MMS မပါပါဘူး။ Apple က OS3.0 ဆိုတဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲကို လွင့်တင်လိုက်တဲ့ အခါမှာ Hacker များက JailBreak လုပ်ဖို့ ကြိုးစားရင်းနဲ့ အဆိုပါ ဒုတိယ မျိုးဆက် iPhone 3G မှာ MMS ကို အောင်မြင်စွာ ထည့်သွင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Apple အရင်က ပြောခဲ့တဲ့ MMS ကို Hardware Radio Function ကြောင့် ထည့်လို့ မဖြစ်ဘူးဆိုတာ စားသုံးသူကို လိမ်ညာတာလားလို့ မေးခွန်း အထုတ်ခံနေရပါတယ်။
ဈေးကွက်ထဲကို ရောက်ရှိပြီး တစ်ပတ်တောင် မကြာသေးခင်မှာပဲ တတိယ မျိုးဆက်သစ် iPhone 3GS ဟာ Overheat လို့ ဆိုရမယ့် အပူချိန် လွန်ကဲမှု ပြဿနာကို ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။ ပထမဆုံး သတိပြုမိတာကတော့ PCWorld က IT Journalist တစ်ယောက်ပါပဲ။ သူက သာမာန် သီချင်းနားထောင်တာနဲ့ အင်တာနက်ကို သုံးနေတုန်းမှာ ဖုန်းက ပူခြစ်လာတာကို သတိပြုမိတာပါ။ အခု နောက်ဆုံးကတော့ ပြင်သစ်မှာ အဲဒီဖုန်းကို သုံးနေတဲ့ သူတစ်ယောက်က ခေါင်းအုံးအောက်မှာ ထားပြီး သီချင်းနားထောင်နေတုန်းမှာ ပုခုံးကို မီးစနဲ့ ထိုးသလို ခံစားလိုက်ရလို့ သတိပြုမိတာပါ။ ဖုန်းအဖြူရောင်ဟာ လွန်ကဲတဲ့ အပူရှိန်ကြောင့် ပန်းရောင်ဖျော့ဖျော့နဲ့ လိမ္မော်ရောင် အဖြစ်ကို ပြောင်းသွားပါတယ်။ iPhone 3GS မော်ဒယ် အသစ်ကို သုံးစွဲသူများ သတိချပ်သင့်ပါတယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့ Apple က အခုထိ တစ်စုံတစ်ရာသော ဖြေရှင်းချက်ကို တရားဝင် ထုတ်ပြန်ခြင်း မရှိသေးပါဘူး။ စားသုံးသူ တစ်ချို့ကတော့ အဆိုပါ ပြစ်ချက်များပါတဲ့ ဖုန်းကို ဈေးကွက်ထဲက ပြန်ရုပ်သိမ်းလေမလား လို့ စောင့်မျှော်နေကြပါတယ်။
iPhone 3GS မှာအရင် မော်ဒယ်အဟောင်းက ပြဿနာတွေ ပြေလည်ခြင်း မရှိသေးပါဘူး။ ဖုန်းပြောပြီးနောက်ပိုင်း ဖုန်းကြောင်လို့ စက်ကို ပိတ်မရတာတို့၊ ဖုန်းချလို့ မရတာတို့ ခုထိ မပြေလည်သေးပါဘူး။ အကောင်းဆုံး အကြံပြုချက်ကတော့ ဖုန်းကို Reset ချလိုက်ဖို့ပါပဲ။ နောက်ပြစ်ချက်တစ်ခုကတော့ Apple က မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ OS 3.0 ဆော့ဖ်ဝဲကို ဆွဲချ အသုံးပြုခဲ့တဲ့ မျိုးဆက်ဟောင်း ဒုတိယ မျိုးဆက် iPhone 3G တွေမှာ ဘက်ထရီတွေ သိသိသာသာ အကုန်မြန်တာကို တွေ့နေရပါတယ်။
PSP ဂိမ်းကိရိယာကို ထုတ်လုပ်တဲ့ ဆိုနီအနေနဲ့ အဆိုပါ PSP များကို ဖုန်းအနေနဲ့ ထုတ်လုပ်နိုင်ခြေ ရှိတယ်လို့ ကောလဟလများ ထွက်ရှိနေပါတယ်။ ဆိုနီက အဲရစ်ဆန် ကုမ္ပဏီနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး ဆိုနီအဲရစ်ဆန် ဖုန်းများ ထုတ်လုပ်ရာမှာ Display ကို အကြီးဆုံး ၂.၈ လက်မ သာ ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဆိုနီ ပရိသတ်များအနေနဲ့ အိုင်ဖုန်းလို မျက်နှာပြင် အကြီးစား (320 x 240) ဖုန်းများကို ဆိုနီကနေ ထုတ်လုပ်ပေးဖို့ အာသီသ ရှိတာ မဆန်းပါဘူး။ အခု PSP များဟာ (480x272) အရွယ်အစား မျက်နှာပြင် ကို အသုံးပြုထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဥရောပ ဘုံဈေးများ နိုင်ငံတွေက Universal Phone Charger Standard ကို သဘောတူညီလိုက်ပါပြီ။ ဒီ သဘောတူညီချက်ကြောင့် နောင် ၂၀၁၁ မှာ ထုတ်လုပ်တဲ့ ဖုန်းအားလုံးသည် Charger တစ်ခုထဲနဲ့ အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။ အခု လောလောဆယ်မှာတော့ ဆိုနီ ချာဂျာကို နိုကီယာမှာ မသုံးနိုင်သလို ဆမ်ဆောင်းဖုန်းကို အယ်လ်ဂျီ ချာဂျာနဲ့ အားသွင်းနိုင်ခြင်း မရှိသေးပါဘူး။ နောင်ထုတ်လုပ်မယ့် ဖုန်းတွေမှာ ချာဂျင်လုပ်ဖို့ Port ကို အားလုံးက တစ်မျိုးတစ်စားတည်း ထုတ်လုပ်တော့မယ်လို့ သဘောတူညီလိုက်တာပါ။ ဖုန်းကုမ္ပဏီများက ပူးပေါင်း ပါဝင်ဖို့ပဲ လိုတော့တယ်။
မကြာတော့တဲ့ အချိန်မှာ ဈေးကွက်ထဲ ဖြန့်ချိမယ့် Windows7OS နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အငြင်းပွားနေကြပါတယ်။ မိုက်ခရိုဆော့ဖ်က အဆိုပါ ဆော့ဖ်ဝဲကို ဈေးနှုန်းသတ်မှတ်ရာမှာ မြင့်မားလွန်းတယ်လို့ ဝေဖန်သံတွေ ထွက်နေပါတယ်။
ဂျပန်နိုင်ငံ တိုယာတာ သုတေသန ဌာနကနေပြီးတော့ ဘီးတပ်ကုလားထိုင်ကို လူ့ဦးနှောက်ရဲ့ အတွေးနဲ့ စေစားခိုင်းစေနိုင်မယ့် စံနစ်ကို အောင်မြင်စွာ တီထွင်လိုက်နိုင်ပြီလို့ သတင်းများက ဆိုပါတယ်။
မြောက်ကိုးရီးယားနိုင်ငံရဲ့ တစ်ခုတည်းသော ဆက်သွယ်ရေး ကုမ္ပဏီက ဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့ 3G GSM ဖုန်းလုပ်ငန်းဟာ ယခုအခါ သုံးစွဲသူပေါင်း ၁၉၀၀၀ ကျော် ရှိသွားပါပြီ။ ပထမ သုံးလပတ်မှာ အမြတ်ငွေ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၃၂၁,၀၀၀ ရရှိခဲ့တယ်လို့ သတင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
Palm Pre ရဲ့ အွန်လိုင်းဆိုင်က ဆော့ဖ်ဝဲကို Download လုပ်သူ လူဦးရေ တစ်မီလီယံ ကျော်သွားပါပြီ။
ဤတွင် သတင်းများကို ကြေငြာလို့ ပြီးပါပြီ။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 10:11 AM 12 ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
ကမ္ဘာတစ်လွား သတင်းတိုထွာများ (News in Brief 290609)
America က ကော်လိုရာဒို အခြေစိုက် အမဲသား ထုတ်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီကနေ ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ အမဲသား စားသုံးမိပြီး ၁၈ ယောက် ဖျားနာနေပါတယ်။ E.coli O157:H7 bacteria နဲ့ ဆက်စပ်နိုင်တယ်လို့ ယူဆပြီး အဆိုပါ အမဲသားတွေ ဈေးကွက်က ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းနေပါတယ်။ အမရိကန်နိုင်ငံမှာ နေထိုင်သူများ သတိထားကြပါ။ အကျယ်ကို ဒီမှာ ရှုပါ။
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာ ရုံတင်ခဲ့တဲ့ Transformer2ဇာတ်ကားဟာ ပြီးခဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ညမှာ စုစုပေါင်း ငါးရက်စာ ရုံဝင်ခ ဒေါ်လာ ၂၀၁.၈ မီလီယံနဲ့ ငါးရက်တာ ၀င်ငွေ အကောင်းဆုံး ဒုတိယဆုကို ပထမနေရာက Dark Knights ရုပ်ရှင်နောက်မှာ ရပ်တည်နေပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီးတော့ ရုံဝင်ငွေတွေ သဲ့ယူနေလိမ့်မယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။ အကျယ်ကို ဒီမှာ ရှုပါ။
အစိုးရက အပြင်းအထန် ဖိနှိပ်နေတဲ့ အီရန် ဆန္ဒပြပွဲ ဒုတိယအကျော့ အပြီးမှာ တီဟီရန်က ဗြိတိသျှ သံရုံးမှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ ဒေသဆိုင်ရာ ၀န်ထမ်းများ ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။ လန်ဒန်ကနေပြီးတော့ အဆိုပါ ဖမ်းဆီးထားခြင်းကို ချက်ခြင်း ရှုတ်ချလိုက်ပြီး အမြန်ဆုံး ပြန်လည် လွှတ်ပေးဖို့ကို တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ အကျယ်ကို ဒီမှာ ရှုပါ။
ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများရဲ့ ငွေကြေးကို အလွဲသုံးစားလုပ်တယ်လို့ စွပ်စွဲခံနေရတဲ့ သန်းကြွယ်သူဌေး Bernard Madoff ရဲ့ အမှုကို စစ်ဆေးနေပါတယ်။ သူကတော့ အပြစ်မရှိကြောင်း ငြင်းဆိုထားပါတယ်။ အကျယ်ကို ဒီမှာ ရှုပါ။
ကမ္ဘောဒီးယား ပြည်တွင်းစစ်တုန်းက ခမာနီ အစိုးရဲ့ S21 လို့ သိကြတဲ့ အကျဉ်းစခန်းမှာ လူပေါင်း ၁၅၀၀၀ ကျော်ကို ထိန်းသိမ်းထားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီထဲကမှ ၇ ယောက်လောက်သာ သက်ရှိထင်ရှား ကျန်နေပါတယ်။ သူကတော့ ထိန်းသိမ်းရေး စခန်းက အရာရှိ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့အနေနဲ့ အပြစ်မရှိကြောင်း လျှောက်လဲချက်ကို စတင်ပါတော့မယ်။ အကျယ်ကို ဒီမှာ ရှုပါ။
ဘရာဇီးလ်နိုင်ငံမှာ ပထမဦးဆုံးသော ၀က်တုပ်ကွေး လူနာသေဆုံးမှု တစ်ခု ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ အကျယ်ကို ဒီမှာ ရှုပါ။ ထိုင်းနိုင်ငံမှာတော့ ပြီးခဲ့ သောကြာနေ့က ပထမဦးဆုံးသော ၀က်တုပ်ကွေးဆိုင်ရာ ဖိတ်စင်မှု ဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်။
Confederation Cup မှာ ဖိုင်နယ် တက်သွားတဲ့ အသင်းနှစ်သင်းကတော့ ဘရာဇီး နဲ့ USA အသင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်တွေဟာ ဘောလုံး အားကစားမှာ သိပ်ပြီးတော့ ထွန်းထွန်းတောက်တောက် မရှိပါဘူး။ တွန်းတွန်းတိုက်တိုက် ကစားရတဲ့ Rugby လိုမျိုး အမေရိကန်ဘော်လုံး အားကစားနည်းမှာသာ သူတို့ စိတ်ဝင်စားကြတာပါ။ အခုတော့ လိမ်ဖယ်လိမ်ဖယ်နဲ့ တစ်ခြားသော နာမည်ကြီး အသင်းများကို ကျော်ဖြတ်က ဖိုင်နယ်သို့ တက်လှမ်းခဲ့ပါတယ်။ နာမည်ကြီး ဘရာဇီး အသင်းနဲ့ ကစားရမှာပါ။ အကျယ်ကို ဒီမှာ ရှုပါ။ (America က ဂိုးသမားကတော့ အင်္ဂလိပ် ပရီမီယားလိဂ်မှာ ကစားဖူးတဲ့ နာမည်ကြီး Tim Howard ဖြစ်ပါတယ်။)
အိုင်ဖုန်း ချစ်သူများ ကသိကအောက် ဖြစ်နိုင်တဲ့ သတင်း တစ်ပုဒ်ပါ။ လက်ရှိရောင်းချနေတဲ့ မော်ဒယ် အသစ် ဖြစ်တဲ့ iPhone 3GS ဟာ အခုအခါ ဈေးကွက်ထဲက ပြတ်လုနီးပါး ဖြစ်နေပါတယ်။ တစ်ချို့ကတော့ ဒါဟာ Apple ရဲ့ ဈေးကွက်ပိုင်းဆိုင်ရာ လှည့်ကွက် ဗျူဟာ ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ပစ္စည်းတွေ ပြတ်နေတော့ ရောင်းအားကောင်းနေတယ်။ လူတွေကို အမြန်အဆန် ၀ယ်ချင်စိတ် တိုးလာအောင် ဆွပေးနေတယ်လို့ ယူဆကြပါတယ်။ အကျယ်ကို ဒီမှာ ရှုပါ။
ကြွေလွင့်သွားတဲ့ ကြယ်တစ်ပွင့်ဖြစ်တဲ့ မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင် သေဆုံးရခြင်း ရဲ့ အကြောင်းရင်းကို ခုထိ ကောက်ချက် မချရသေးပါဘူး။ ဆရာဝန်ရဲ့ရှေ့နေပြောကြားတာကတော့ သူ့ဆရာဝန်သည် မိုက်ကယ်ကို Demerol ဆိုတဲ့ ဆေး မပေးခဲ့ဘူးလို့ ငြင်းဆိုထားပါတယ်။ အကျယ်ကို ဒီမှာ ရှုပါ။
ဟွန်ဒူးရပ်စ်နိုင်ငံမှာ သမ္မတကို လူထုအားနဲ့ ဖြုတ်ချခဲ့ပြီးနောက် အကျယ်အကျယ် မငြိမ်းဖွယ် ဖြစ်နေပါတယ်။ သမ္မတကတော့ သူ့ကို ဖမ်းဆီးပြီး ဖြုတ်ချတာ ဖြစ်လို့ သမ္မတ အဖြစ်ကနေ နှုတ်ထွက်မပေးနိုင်ဘူးလို့ ငြင်းဆန်ထားပါတယ်။ ဟွန်ဒူးရပ်စ်မှာ အခုအခါ ကာဖျူး အမိန့် ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ အကျယ်ကို ဒီမှာ ရှုပါ။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 11:04 AM 19 ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
သေးငယ်တဲ့ ကမ္ဘာပိုင်ရှင်က ပြုစုလို့ ဒီနေ့ ညနေစာ ဟန်ကျသွားတယ်။
Golden Miles က Din Deang Lea Lurk ဆိုလား။ စားနေကျ ဆိုင်လေးပါ။
စားဖြစ်တာလေးတွေကတော့ အောက်မှာ ပုံလေးတွေနဲ့...။
၁။ ကိုက်လန် ၀က်ခေါက်ကြော်
၂။ မပါမဖြစ် ပင်လယ်စာ တုံယမ်း
၃။ သဘောင်္သီးထောင်း (လယ်ပုစွန်လုံး)
၆။ ၀က်သားပြုတ်သုပ် (ဆန်လှော်ထည့်) (ဒါ့ပုံ ရှာမတွေ့လို့ မထည့်လိုက်ရတော့ဘူး)
သရက်သီး ဖျော်ရည် နှစ်ခွက်ဆင့် သောက်ခဲ့တယ်။ စပ်လွန်းလို့...
(ပို့စ်အသစ် မတင်ဖြစ်၊ ပုံတွေနဲ့ ဆားချက်တယ်။)
ရေးသားသူ Ko Boyz at 12:54 AM 24 ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
မနေ့က ကြာသပတေးနေ့ (၂၀၀၉ ဇွန်လ ၂၅ ရက်) မှာ ကမ္ဘာကျော် လူသိထင်ရှားတဲ့ အနုပညာရှင်နှစ်ဦး ကွယ်လွန်သွားပါတယ်။
တစ်ယောက်ကတော့ ၁၉၇၀ နှစ်များဆီက ကိုကိုကာလသားများရဲ့ စိတ်နှလုံးကို ဆွဲယူသိမ်းကျူံး လှုပ်ရှားစေခဲ့တဲ့ မင်းသမီး Farah Fawcett ဖြစ်ပါတယ်။ စအို ကင်ဆာနဲ့ ဆုံးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၀၆ တုန်းက ဖြစ်တာ သိရပြီး အမေရိကားမှာ ကုသတာ မအောင်မြင်လို့ ဂျာမဏီမှာ သွားကုသခဲ့ပါသေးတယ်။ မနေ့ကပဲ အဲဒီ ကင်ဆာ ရောဂါနဲ့ ဆုံးပါးသွားပါတယ်။ ဆုံးပါးစဉ်မှာ အသက် ၆၂ နှစ် ရှိပါပြီ။ အကျယ် ဖတ်ချင်ရင် ဒီမှာ သွားဖတ်နိုင်ပါတယ်။ Wiki မှာလဲ ဖာရာဖော့ဆက် အကြောင်းကို ဒီလို ရေးထားပါတယ်။
မရှေးမနှောင်း တစ်ရက်ထဲမှာပဲ နောက်တစ်ယောက် လူသိများတဲ့ အနုပညာရှင် တစ်ယောက် ဆုံးပါးပြန်ပါတယ်။ နှလုံးရောဂါကြောင့်လို့ ဆိုပါတယ်။ ပေါ့ပ်အဆိုတော့ မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်ပါ။ မိုက်ကယ်ဟာ ကျန်းမာရေး အခြေအနေကြောင့် တစ်ချို့သော concert များကို တင်ကြို အကြောင်းကြားခြင်း မရှိပဲ ဖျက်လိုက်လို့ သူနဲ့ စာချုပ်ချုပ်ထားတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ အမှု ဖြစ်လိုက်သေးတယ်။ မိုက်ကယ်ဟာ အသားအရေ လှပစေချင်လွန်းလို့ ခွဲစိတ်မှုတွေ အလီလီ လုပ်ခဲ့သလို Treatment အမျိုးမျိုးကိုလဲ လုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ ကလေးတွေကို ချစ်တတ်တယ်လို့ နာမည်ကြီးသလို ကလေးတွေကို မတော်တရား ကျင့်တယ်ဆိုပြီး အမှုအခင်းတွေလဲ ဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ ကွယ်လွန်သူ နာမည်ကြီး အဆိုတော့ အဲလ်ဗစ် ပရက်စလေရဲ့ သမီး လီဆာ ပရက်စလေနဲ့ လက်ထပ်ခဲ့သေးသော်လည်း လမ်းခွဲခဲ့ကြပါတယ်။ နောက်တော့ နပ်စ်မ တစ်ယောက်နဲ့ ကလေးမွေးတယ်လို့ ဆိုပြန်တယ်။ မွေးကာစကလေးလေးကို ပြတင်းပေါက်ကနေ တိုက်အောက်က ပရိတ်သတ်ကို လက်တစ်ဖက်တည်းနဲ့ ကိုင်မြောက်ပြလို့ ကလေးသူငယ်များ အခွင့်အရေး ကာကွယ်ရေး အဖွဲ့က တရားစွဲတာလဲ ခံရပါတယ်။ သူ့ဘ၀မှာ သူတစ်ခုခု လုပ်လိုက်တိုင်း ဟိုးလေးတစ်ကြော် ဖြစ်သွားတာချည်းပါပဲ။ ကလေးတွေ အတွက် နဲဗားလဲန်းကို သူ့ခြံထဲမှာ ဆောက်ပေးတယ်။ ကလေးတွေကို ဖိတ်ပြီး သူကိုယ်တိုင် လိုက်ကစားတယ်။ ကမ္ဘာကြီးအတွက် ကောင်းကျိုးကိုလဲ သူလုပ်ပေးခဲ့သေးတယ်။ သူသီဆိုခဲ့တဲ့ သီချင်းတွေထဲက အာဖရိက အငတ်ဘေးကို ကူညီဖို့အတွက် နိုင်ငံတစ်ကာက အဆိုတော်တွေ ပါတဲ့ We are the World ဆိုတဲ့ သီချင်း၊ စစ်မက်တွေ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ ကမ္ဘာကြီးကို ကယ်တင်ဖို့ဆိုပြီး ဆိုတဲ့ Heal The World ဆိုတဲ့ သီချင်းတွေဟာ အခုထိ လူသိများနေတုန်းပါပဲ။
သူဟာ Moon Walk အက ကို Thriller အခွေထဲမှာ စတင် မိတ်ဆက်ပေးပြီး ကမ္ဘာ့လူငယ်ထုကို ဘရိတ်ဒန့်စ် ဆိုတဲ့ အကကို မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တယ်။ သီချင်းတွေ ထုတ်လုပ် သီဆိုခဲ့ပြီး ပလက်တီနမ် ဓါတ်ပြားဆု ပေါင်းများစွာကို ဆွတ်ခူးခဲ့ပါတယ်။
သူ့ရဲ့ အထင်ကရ အရှိဆုံး ကမ္ဘာလှည့် စတိတ်ရှိုးကတော့ Dangerous World Tour အမည်ရတဲ့ ခရီးစဉ် ဖြစ်ပါတယ် ၁၉၉၂ ၀န်းကျင်က လှည့်လည် ဖျော်ဖြေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
မနေ့က သူငှားရမ်းနေတထိုင်တဲ့ Bel Air မှာ သူ့ကို သတိလစ်နေတာ တွေ့ရပါတယ်။ ၆ မိနစ်သာ မောင်းရတဲ့ ဆေးရုံကို သယ်သွားပြီး လိုအပ်တဲ့ CPR စတာတွေကို လုပ်အပြီးမှာ သူ့ကို ကယ်တင်နိုင်ခြင်း မရှိပဲ ဆုံးပါးသွားပြီလို့ ကြေငြာလိုက်ရပါတယ်။ အကျယ်ကို ဒီမှာ ဖတ်နိုင်ပါတယ်။ Wiki မှာတော့ သူ့ရဲ့ အကြောင်းကို ဒီလို ရေးထားပါတယ်။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 11:09 AM 10 ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
Labels: condolence, Miscellaneous
ရေးသားသူ Ko Boyz at 8:30 PM9ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 11:38 PM7ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
IRC Chat ဆိုတာကို အွန်လိုင်း ချက်တင် ထိုင်ဖူးသူတိုင်း သိပါလိမ့်မယ်။ Chatting ထိုင်ဖို့ ချက်ရွမ်း သတ်သတ်ချည်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။ အရင်တုန်းက ပုဂံ မပျက်ခင်ကတော့ irc Chat , ygnchat, baganchat, အစရှိသဖြင့် အများကြီး ရှိပါတယ်။ mIRC ဆိုတဲ့ ချက်ဆော့ဖ်ဝဲသာ ရှိရင် လူတိုင်း ၀င် join နိုင်ပါတယ်။ ချက်ဆာဗာထောင်ပေးတဲ့သူ ရှိရင် ပိုအဆင်ပြေတာပေါ့လေ။ ကိုယ်ပိုင် ချက်ရွမ်းလေး လုပ်ပြီး ချက်တင်လေးတွေ ထိုင်ချက်ကြတာပေါ့။
အခု ဝေမျှချင်တာလေးကတော့ ချက်တင်ထဲမှ ကြုံတွေ့ရတဲ့ ဟာသများ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီထဲက ကျွန်တော် သဘောကျ နှစ်ခြိုက်မိတဲ့ ကောင်းနိုးရာရာ ဟာသ လေးများကို ရွေးချယ် တင်ပြ သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဟာသများကို လုံးစေ့ပတ်စေ့ နားလည်ဖို့ကတော့ irc Chat Room ဝေါဟာရများနဲ့ အနည်းငယ် အကျွမ်းတစ်ဝင် ရှိဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ အတတ်နိုင်ဆုံး အများနားလည်နိုင်တာလေးတွေ တင်ပြသွားပါမယ်...။
#244321 +(25710)- [X]
Cthon98> yep, no matter how many times you type hunter2, it will show to us as *******
Cthon98> er, I just copy pasted YOUR ******'s and it appears to YOU as hunter2 cause its your pw
#99060 +(26934)- [X]
ကြည့်ရတာ t0rbad ဆိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်က အဲဒီချက်ရွမ်းထဲက နည်းနည်းပါဝါ ရှိတဲ့ သူ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ သူက သူ့အကြောင်းဇာတ်လမ်း ပြောမယ်ကြံတော့ BlackAdder ဆိုတဲ့ တစ်ယောက်က ကဖျက် ယဖျက် လုပ်လုပ်နေတော့ ချက်ရွမ်းထဲကနေ Kick လိုက်တာ။ kick ရုံ Kick ရင် ကိစ္စမရှိဘူး။ ပြန် join လို့ရပါတယ်။ Ban လိုက်ရင်တော့ အဲဒီ ချက်ရွမ်းကို join လို့ မရတော့ပါဘူး။
"*** t0rbad sets mode: +b BlackAdder*!*@*.*"
အဲဒီ စာသားမှာ ပါတဲ့ +b ဆိုတာက ban လိုက်တာပါ။ t0rbad က BlackAdder ကို ဘန်းလိုက်တာ။ အဲလို ဘန်းလိုက်တာကို မြင်ရော ကျန်တဲ့ နားထောင်နေတဲ့သူက အဘန်းခံရမှာ စိုးလို့ t0rbad ပြောသမျှကို "Right", "Right" ဆိုပြီး သံယောင်လိုက်တာ မြင်ရတော့ သဘောကျမိတယ်။
#207373 +(17716)- [X]
<-- Beefpile has quit (sick fuckers) anamexis> :<
ဒါကတော့ နည်းနည်း လူကြီး ဟာသဆန်သွားပါတယ်။ themacmind ဆိုတဲ့ chat room ထဲမှာ anamexis က သူကုဒ်ဗူး ဖွင့်တဲ့ အကြောင်းကို ပြောနေတုန်း Beefpile က ၀င်လာတယ်။ နောက်မှ ၀င်လာသူဟာ သူဝင်မလာခင် အချိန်မှာ ပြောနေတာ၊ ဆွေးနွေးနေတာကို မမြင်ပါဘူး။ သူစရောက်တဲ့ အချိန်ကမှ စပြီးသာ ဆွေးနွေးတာတွေကို မြင်ရတာပါ။ အဲဒီမှာ anamexis က ဆက်ပြောတာကို Beefpile က တစ်ဝက်တစ်ပျက်သာ မြင်လိုက်တော့ တစ်မျိုး အတွေး ပေါက်သွားပါတယ်။ <-- Beefpile has quit (sick fuckers) ဒီစာသားကတော့ Beefpile က ထွက်သွားတာပါ။ irc chat software မှာ ကိုယ် chatroom ကနေ ထွက်သွားရင် စာသားတစ်ခုခု ချန်ထားခဲ့လို့ ရတဲ့ function ရဂှိပါတယ်။ အဲဒီ ချန်ထားတဲ့ စာသားက ကိုယ် quit လုပ်လိုက်ရင် နောက်မှာ ပေါ်လာတဲ့ စာသားလေးပေါ့။ အခုလဲ Beefpile က ဒီလူတွေ ညစ်တီးညစ်ပတ် ဆွေးနွေးနေတယ် ထင်ပြီး sick fuckers ဆိုတဲ့ မက်ဆေ့ခ်ျ ထားပြီး ထွက်သွားတာ.. anamexis တစ်ယောက် ဘလိုင်းကြီး အဆဲခံလိုက်ရလို့ အီလည်လည် ဖြစ်ကျန်ခဲ့ရော...။
ကဲ ဒီနေ့တော့ ဒီလောက်ပါပဲ။ နောက်နေ့တွေမှ ဆက်တင်ပါမယ်...။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 5:36 PM6ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
ဒီအောက်က ပို့စ်မှာ ဘာထူးသလဲ။
PC World ကနေ ကူးလာတာပါ။
Now using Vista, Aung Kyaw Moe misses XP's keyboard shortcuts for shutting down, rebooting, and hibernatingacomputer.
Before I answer the question, let me satisfy any XP users who are wondering "What keyboard shortcuts for shutting down, rebooting, and hibernating my computer?
Actually, before I do that, I'd better explain the Windows Key (referred to later in this tip as WIN). Look at the bottom row of your keyboard. See that key with the Windows logo between CTRL and ALT? That's the WIN key.
As with XP, this is really about manipulating the Start menu with the keyboard. You press the Windows key to bring up the menu. But thanks to Vista's search box, pressing an alphanumeric key won't help here. You need to use arrow keys--at least at first.
Going into Sleep mode is pretty easy: Press WIN, the RIGHT ARROW, then ENTER.
All the other options require you to press WIN, then press the RIGHT ARROW three times. What you press next depends on what you want to do:
Shutdown: ENTER, or U
By the way, once you've pressed WIN, you can use the arrow keys to navigate all over the Start menu. Give itatry.
Here's another option you might like: commands. Press WIN, then type:
Shutdown: shutdown -s t0(note the blank spaces before -, t, and 0)
Reboot: shutdown -r t 0
For more on shortcut keys, see Using Just the Keyboard, How Do I Fill InaDialog Box?, Use Your Keyboard for Faster Windows Control, and Microsoft's Keyboard shortcut page.
Credit to : PC World
(ဤပို့စ်သည် ကော်ပီကူး၍ ပြန်တင်ခြင်း တစ်နည်း ဆားချက်ခြင်း မည်၏။)
ရေးသားသူ Ko Boyz at 10:44 AM5ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
ခိုင်သင်းကြည်လေး တစ်ယောက် တောသူမလေး စတိုင်ဖမ်းလို့ ...
ပါးမှာလဲ ပါးကွက်လေး ကွက်လို့...။
လက်ထဲမှာတော့ ဗူးလေး တစ်ဗူး ကိုင်လို့ ဇွန်ဇီကြော်ငြာထဲကလို တင်ကလေးကို လှုပ်ကာ လှုပ်ကာနဲ့ပေါ့...။
“ဟိုင်း.. ဟိုင်း V5 Pepsodent” ဆိုပြီး အိန္ဒိတေးသံအလိုက် ကြော်ငြာနေတုန်း....
ဗြုန်းဆို.. ကလေးလေး တစ်ယောက် ခုန်ဝင်လာတယ်။
ပြီးတော့ အာဗြဲကြီးနဲ့ “သွား ဖြူဖွေးခိုင်ခံ့ ပိုးပေါက် မရှိ” ဆိုပြီး အသားကုန်အော်လိုက်တယ်။
အဲဒီအချိန်မှာပဲ ဂျူတီကုတ် အကျီင်္ဖြူရှည် ၀တ်ထားတဲ့ ဆရာဝန်တစ်ယောက်က အံသွားပုံစံ အတု လုပ်ထားတဲ့ မော်ဒယ်သွားရှေ့မှာ ရပ်နေရင်း “ပိုးစားထားတဲ့ သွားကို ခေါက်ကြည့်ရင် နာကျင်မှု ဝေဒနာကို ခံစားရပါလိမ့်မယ်” လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီနောက် အဲဒီသွားကို သူ့လက်ထဲက ကိရိယာလေးနဲ့ တစ်ဂေါက်ဂေါက် စမ်းခေါက်ပြချိန်မှာ ကျွန်တော် အိပ်ရာက လန့်နိုးလာပါတယ်။ နာလိုက်တာဗျာ။ ကျွန်တော့်အံသွားက ကိုက်နေတာ။ သွေးတစ်ချက်ခုန်လိုက်တိုင်း တစ်စစ်စစ်နဲ့ ကိုက်နေတာ။ သိလိုက်ပါပြီ။ ပိုးစားတဲ့နေရာက သွားအာရုံကြောတွေ infection ၀င်နေပြီဆိုတာ။
အရင်တစ်ခါက ညာဘက်ခြမ်း အပေါ်ဘက် ဒုတိယ အံဆုံးမှာ ဒီလိုပဲ သွားပိုးစားပြီး အခေါင်းပေါက် ဖြစ်ဖူးတယ်။ နောက် အာရုံကြောကို ထိတယ်။ ဒါနဲ့ အာရုံကြောကို ဖြတ်ပြီး ပြန်ဖာလိုက်ရတယ်။ အဲဒါ ဆရာဝန်ဆီ အခေါက်ခေါက် အခါခါ သွားရတယ်။ အာရုံကြောဆိုတာ သွားကို nutrition ပေးနေတဲ့ အရာပေါ့။ သွားကို လိုအပ်တဲ့ အစာ၊ အာဟာရများ ပို့ပေးနေတာ ဆိုလဲ မမှားဘူး။ တော်ရုံတန်ရုံ သွားအက်တာများဆို သူ့အလိုအလျောက် ပြန်ကောင်းတယ်တဲ့။ ခုတော့ အဲလို သွားအာရုံကြောကို ဖြတ်လိုက်တော့ သွားက သေသွားပြီပေါ့။ ကယ်လ်စီယမ် အတုံးတစ်ခုက လွဲလို့ ဘာမှ ထူးထူးခြားခြား စွမ်းဆောင်မှုတွေ မပေးနိုင်တော့ဘူး။ အမာဝါးမိလို့ မတော်တဆ အက်သွားလဲ ပြန်မကောင်းတော့ဘူး။ သွားကျန်းမာရေးများ အရေးကြီးပုံ။
အခုလက်ရှိ ဖြစ်နေတာလေး ပြန်ဆက်မယ်။ အခုလဲ ဘယ်ဘက်အပေါ်ခြမ်း ဒုတိယ အံဆုံးပဲ။ ပထမဟာနဲ့ ဘယ်ညာပဲ လွဲတာ။ ရေအေးအေးသောက်ရင် ကျဉ်ပြီဗျာ။ ညညဆို ကိုက်လို့ အိပ်မရတော့ဘူးဗျာ။ လန့်လန့် နိုးတာ။ ပြီးတော့လဲ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးများ သောက်သော်လည်း မပျောက်ဘူးဗျ။ သွားနာတာ၊ သွားကိုက်တာ အတော့်ကို အခံရခက်တာကလား။ လူကို ပါးချိတ်ကို လက်သီးနဲ့ အသားကုန် လာထိုးစမ်းပါ... အခု သွားနာတာလောက်တောင် မနာဘူး ထင်တာပဲ။ အော်ငိုရအောင်လဲ မဖြစ်။ ကိုက်တာကတော့ တစ်စစ်စစ်နဲ့ဗျာ....။ အခုတစ်ခေါက် ဖြစ်တော့ လူသူမနီး ပင်လယ်ကြီးထဲမှာ...။ Medic တော့ ရှိပါရဲ့။ သူပေးတဲ့ ဆေးတွေက မတိုးဘူးဗျ။ ကောက်ပြန်ရအောင်လည်း အလုပ်က မပြီးပြတ်သေးတာရယ်၊ ပြန်ဖို့ ဟယ်လီကော်ပတာက ရာသီဥတု မကောင်းလို့ လာမကြိုနိုင်တာရယ်ကြောင့် ပင်လယ်ထဲမှာ တစ်ပတ်တိတိ ကြာသွားပါတယ်။ ဒီ ရက်သတ္တပတ် ၇ရက်ဟာ ကျွန်တော့်အတွက် ငရဲပါပဲ။
သွားကိုက်တာနာလွန်းလို့ လူတောင် ဖျားယူရတဲ့ အထိပဲ။ ပင်လယ်ထဲမှာ နေ့လည်ပိုင်း ပလက်ဖေါင်းပေါ် တက်အိပ်မိတာလဲ ပါမှာပေါ့။ လေတွေက တစ်ဟူးဟူး တိုက်နေတာ။ အာသီးရောင်တယ်။ တစ်ကိုယ်လုံး ကိုက်ခဲတယ်။ မျက်လုံးတစ်ဝိုက် အပူကြီးပြီး ကိုက်ခဲတယ်။ အို ခံလိုက်ရတာ ပြောမနေပါနဲ့တော့။ ဆေးတွေ သောက်လိုက်တာ...။ သူတို့ဆီမှာ ပန်နယ်ဒေါလို အစွမ်းထက်တဲ့ ဈေးတွေ မရှိဘူး။ မပျောက်ဘူျးော။ မပျောက်တော့ လူက ခံနေရတာပေါ့။ (ကျွန်တော်က သာမာန် အာဂန္တုက အဖျားလောက်ဆို ဆေးမသောက်ဘူး။ တစ်ခုခုကို အပြင်းအထန်လုပ်တယ်။ ချွေးများများ ထွက်အောင် လုပ်တယ်။ အော်တို ပျောက်တာပဲ။ အပြင်းအထန် ဖျားရင်တော့ ဆရာဝန်ဆီ ပြေးတာပေါ့။ ဆေး တော်ရုံ မသောက်တော့ ဆေးသောက်ရင် အာနိသင် ထိရောက်တယ်။)
အဲဒါနဲ့ပဲ ပင်လယ်ထဲမှာ သွားနာခြင်း ဒုက္ခ၊ ကိုက်တွေ ကိုက်ခဲခြင်း ဒုက္ခ၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း ဒုက္ခ၊ မျက်စိကိုက်ခြင်း ဒုက္ခ၊ လည်ချောင်းထဲက အာသီးရောင်လို့ နာတဲ့ ဒုက္ခ စသဖြင့် ဒုက္ခပေါင်းစုံကို ခံစားပြီးသကာလ ဒုက္ခသစ္စာကို မသိပါလိုက်ဘူး။ စင်ကာပူ ပြန်ရောက်တော့ NUH လို့ ခေါ်တဲ့ အစိုးရ ဆေးရုံကြီးမှာ တစ်ခါတည်း သွားပြပါတယ်။ Appointment မယူပဲ တစ်ခါတည်း Walk in သွားပြတာပါ။ နည်းနည်းတော့ စောင့်ရတယ်။ အဲဒီမှာ သွားကို ဓါတ်မှန်ရိုက်ကြည့်ပြီးတဲ့နောက် သွားဆရာဝန်က ပြောပြပါတယ်။ သွားနာတာ သက်သာအောင် လုပ်ရမယ့် နည်း နှစ်နည်း ရှိပါတယ်။
၁။ သွားကို နှုတ်ပစ်ဖို့။
၂။ အမြစ်ကို ဖြတ်ပြီး Refill လုပ်ဖို့။
ပထမ တစ်နည်းကို မလုပ်ချင်ဘူးလို့ ပြောတော့ ဒုတိယနည်းမှာ အမြစ်ဖြတ်ရင် ဒေါ်လာ ၉၀၀ ကျသင့်မှာပါတဲ့။ Crown လုပ်ပြီး ပြန်စွပ်တာ ဒေါ်လာ ၇၀၀ ကျပါမယ်တဲ့။ နင်သွားတာပဲ။ ဆရာဝန်လဲ ရိပ်မိတယ် ထင်ပါ့။ လောလောဆယ် သက်သာအောင် အမြစ်ဖြတ်ပြီး Temporary Dressing လုပ်ပေးမယ်။ တစ်နှစ်လောက်တော့ ခံကြတာပါပဲတဲ့။ ရာနှုန်းအနည်းငယ်သော လူနာများကသာ ပြန်နာကြတယ်တဲ့။ ဆိုတော့ အဲဒါလေးက ၁၅၀ ကျော်ကျော် ကျမယ်တဲ့။ လုပ်မယ်လို့ ပြောတော့ ဆရာဝန်များကလဲ လိုအပ်တာလေးတွေကို လုပ်ပေးပါတယ်။ ထုံဆေးပေး၊ အမြစ်ဖြတ်၊ ယာယီ သွားဖါတာ လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ စုစုပေါင်း တစ်နာရီကျော်ကြာပါတယ်။ ကျသင့်ငွေကတော့ Consultant fees, Operation Fees အားလုံး စုစုပေါင်း ၁၅၇ ဒေါ်လာပါ။ Pharmacy မှာ ဆေး ၀င်ဝယ်တော့ ၁၇ ကျပ် ထပ်ကုန်ပါတယ်။ ပြန်ကိုက်လာရင် သောက်ဖို့ ဆေးတွေပါ။
စကားမစပ် NUH ကို အခမဲ့ Shuttle Bus ဆွဲပေးပါတယ်။ Dover MRT ကနေ Singpore Polytechnics ရဲ့ ဆန့်ကျင်ဖတ် ကားမှတ်တိုင်နားမှာ ဘတ်စ်ကား စောင့်စီးနိုင်ပါတယ်။ ကားနံပါတ် ၁ ကို စီးပြီး Main Building က Level ၁ ကို သွားပါ။ Dental Center ဆိုတာ ရှိပါတယ်။ ဈေးသက်သာပါတယ်။
ကိုယ်ပိုင်ကား၊ တက္ကစီ၊ အမ်အာတီ နဲ့ ဘယ်လို သွားရမယ် လာရမယ်ဆိုတာ အောက်က လင့်ခ်မှာ သွားရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
How to get to NUH
ရေးသားသူ Ko Boyz at 12:04 PM 24 ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
Labels: health, nuh, tooth
ရေးသားသူ Ko Boyz at 8:46 AM 16 ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 8:30 PM 16 ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 2:05 AM 10 ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
Korean Movies OST ကြိုက်မိသော ဇာတ်ဝင်သီချင်းများ (၂)
အခုတစ်ခေါက် နားဆင်စေချင်တဲ့ ဇာတ်ဝင်သီချင်းကတော့ ကိုရီးယားကားများထဲက ဖြစ်ပါတယ်။
ပထမကားကတော့ The Classic အမည်ရ ကိုရီးယားကားလေး ဖြစ်ပါတယ်။ April Snow ဇာတ်ကားထဲက မင်းသမီးလေး Son Ye Jin ပါဝင် သရုပ်ဆောင် ထားတာပါ။ အဲဒီထဲကမှ နားထောင်ချင်နေတဲ့ သီချင်း နှစ်ပုဒ် ရှိပါတယ်။ ပထမ တစ်ပုဒ်ကတော့ အအေးလေး၊ အလွမ်းအဆွေး အမျိုးအစားလေးပေါ့။ ဒီတစ်ခါလဲ စာသား နားမလည်ပေမယ့် သီချင်းသံစဉ်ကို ခံစားကြည့်လိုက်ပါ။
ဒုတိယ တစ်ပုဒ်ကတော့ အမြူးလေးပါ။ Me To You, You To Me လို့ အမည်ရပါတယ်။ ဗားရှင်းနှစ်မျိုး တင်လိုက်ပါတယ်။
Me To You, You To Me (Version 1)
Me To You, You To Me (Version 2)
Imeei ကနေ MP3 Version တော့ တွေ့တယ်။ ဒေါင်းလုဒ်လုပ်တာကတော့ ဘယ်လိုမှ မလုပ်တတ်လို့ တစ်ယောက်ယောက်ကို မေးလိုက်ပါ နန်းညီ။
I to you, You to me - THE CLASSIC
နောက်တစ်ခါ ထပ်နားဆင်ကြည့်စေချင်တာကတော့ နာမည်ကျော် My Sassy Girl ဇာတ်ကားထဲက သီချင်းပါ။ I Believe လို့ အမည်ရပါတယ်။ ဒီသီချင်းကတော့ အတော့ကို နာမည်ကြီးသွားတယ်။ ဂျပန်၊ တရုတ်၊ မလေး၊ ဗီယက်နမ်၊ ထိုင်း အားလုံး ပြန်ဆိုထားကြတယ်။
ဘောနပ်စ်အနေနဲ့ကတော့ ကျွန်တော် သဘောကျတဲ့ Pachebell ရဲ့ Canon သီချင်းကို My Sassy Girl နဲ့ The Classic နှစ်ကားစလုံးမှာ သုံးထားပေးတာပါပဲ။ အခုဗားရှင်းကတော့ My Sassy Girl ထဲက သုံးထားတဲ့ ဗားရှင်းပါ။ နာမည်ကျော် ဂန္တ၀င်တေးသွားဖြစ်တဲ့ Pachebell ရဲ့ Canon ကို အောက်မှာ နားဆင် ခံစားကြည့်ပါ။ (ကျွန်တော့်ရဲ့ အိပ်ရာဝင်တေးသွားလေး လို့လဲ ပြောလို့ရပါတယ်။)
ရေးသားသူ Ko Boyz at 1:10 AM3ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
၁၉၉၃ လောက်တုန်းက ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ သီချင်း တစ်ပုဒ်ပါ။ 2000 ကျော်နှစ်များလောက်ဆီက ကြည့်ရတဲ့ ကိုရီးယား ဖြစ်တဲ့ Calla မှာ ဒီသီချင်းလေးကို ဇာတ်ဝင်ခန်းသီချင်း အနေနဲ့ အသုံးပြုရာက သတိထားမိတယ်။ အေးအေးလေးနဲ့ နားထောင်လို့ ကောင်းတဲ့ သီချင်းလေးပါပဲ။
ရုပ်ရှင်ကတော့ သမားရိုးကျ ဇာတ်ကားကနေ ခွဲထွက်တဲ့ ကားလေး တစ်ကားပေါ့။ ယုတ္တိလွန်ကား တစ်ကားပေါ့။ ပျိုပျိုမေတို့ အသဲစွဲ မေ့ရက်ဘူး ချစ်ဦးရယ် ဇာတ်လမ်းတွဲထဲက မင်းသား ဂျွန်စော ပါတဲ့ကား ဖြစ်ပါတယ်။ အခုကတော့ သီချင်းကိုပဲ ခံစားလိုက်ပါ။ စာသား နားမလည်ပေမယ့် သံစဉ်လေးကတော့ မဆိုးပါဘူး။
နောက်တစ်ပုဒ်ကတော့ ကိုရီးယားနဲ့ ဂျပန် သရုပ်ဆောင် နှစ်ဦး ပါဝင် ထားတဲ့ Friends ဇာတ်လမ်းတွဲထဲက သီချင်းလေးပါ။ "The One" လို့ အမည်ရပါတယ်။ ကိုရီးယားမင်းသား Won Bin (ထယ်စောက်)နဲ့ ဂျပန်မင်းသမီး Kyoko Fukada တို့ ပါဝင် သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ကားလေးပါ။
ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ ဟောင်ကောင်ကို အလည်ရောက်သွားတဲ့ ဂျပန်မလေးတစ်ယောက် သူ့ရဲ့ ပိုက်ဆံအိတ်တွေ အလစ်သုတ်ခံရတော့ ကိုရီးယားတိုးရစ်တစ်ယောက် ယူတယ် ထင်ပြီး စွပ်စွဲရာက စတဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးပါ။ လေးတွဲရှိပါတယ်။ ရန်ကုန်မှာ တော်တော် ခေတ်စားသွားသေးတယ်။ သီချင်းလေး ကြိုက်လို့ မျှလိုက်တာပါ။ အောက်မှာ နားဆင်ကြည့်ပါ။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 12:30 AM3ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
Labels: korean, movies, OST, songs
ရေးသားသူ Ko Boyz at 11:57 AM 16 ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 2:31 PM 14 ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။